Wenza kanjani Ukuzigcina kunye nabanye
Kutheni ukhuseleko lubalulekile
Ezinye izifo kuthiwa zidalwa zintsholongwane ezinobungozi ezaziwa ngokwe ntsholongwane. Ulosuleleko olwenziwa zintsholongwane lungangabinabungozi, njengo khohlokhohlo oluqhelekileyo, kodwa ezinye zinganobungozi, njengomkhuhlane, ukutya okunetyhefu kwaye nomqala oqaqambayo.
Iintsholongwane zinganwenwa ukusuka komnye umntu ukuya komnye, njengoku khohlela, ukuthimla okanye ukuxhawulana. Iintsholongwane zingatyaleka ngokuphatha into ebiphethwe ngumntu osulelwe yintsholongwane, njengomphezulu wetafile onkanye isilwanyane sekhaya. Enye indlela iintsholongwane ezisasazeka ngayo kukutya ukutya okosulelekileyo okanye isiselo. Ukudibana nezinambuzane okanye izilwanyana eziphethe ulwasuleleko zinga dlulisa iintsholongwane.
Iintsholongwane inganwenwa akuyonto engaziwayo. Into engeno kwaziwa, kananjalo, ulosuleleko lu ngenzeka ngamaxesha okuqandusela- ngexesha phambi kokuba umntu abonise iimpawu futhi abone ukuba uyagula. Kungoko imiqathango yokhuseleko kufuneka ibekhona ukwehlisa ubungozi bokusasaza isifo.
Ukumisela imigaqo siseko equlathwe yilencwadana ingakhusela ukugula okwenzekayo kwantlandlolo.
Umzimba wakho uyazilwa intsholongwane ngokwendalo kunye nokungcola okusingqongileyo. Ukuzigcina nokukhusela umzimba wakho ekuguleni, ezizilumkiso zilandelayo ziyanceda:
Yitya ukutya rhoqo okunezakhamzimba.
Ukuzigcina ucocekile yeyonandlela enamandla ukukhusela ukunwenwa kwentsholongwane nokunqanda ukosuleleka kwabandingqongileyo.
Ukuhlamba izandla yenye yeendlela zokunqanda ukusasazeka kweentsholongwane. Hlamba izandla qho, ingakumbi emveni kwezizinto zilandelayo:
a. Ukufinya nge mpumlo, ukukhohlela okanye ukuthimla
b. Ukusebenzisa indlu yangasese
c. Phambikokutya, xawusitya naxa ugqiba kutya
d. Phambikokutya naxa ugqiba kutya
e. Ngaphambi naxa ugqiba ukunakekela umntu ogulayo
f. Ngaphambi naxa ugqiba ukunakekela inxeba
g. Xa ugqiba ukuphatha umgqomo
h. Xa ugdiba ukuphatha isilwanyane, ukutya kwaso okanye ilindle laso
Xawuhlambha izandla, usebenzisa isephu noku hlamba ngamanzi atshisayo. Hlambisisa izandla zakho kangange mizuzwana engamashumi amabini, uzipure uzomise nge tawuli ecocekileyo okanye umoya wokomisa izandla. Sebenzisa itawuli ukuvala amanzi.
Sebenzisa izicocisi zandla.
Izicocisi zandla zingasetyenziswa kodwa ke ayivaleli ukuhlamba izandla nge sephu. Zisetyenziswa phezu koku hlambha kwezandla nge sephu okanye xakunga fumaneki isephu namanzi. Sebenzisa isicocisi sesandla esinomgqaliselo wotywala ongama shumi amathandathu.
Nciphisa ukwabelana ngezinto zakho.
Ukunqanda ukusasazeka kwentsholongwane, sukwabelana ngezixhobo zokutya, iglasi yokusela, iikomityi okanye nasiphi na isitya. Futhi sukwabelana ngelaphu loku hlamba, nomandlalo, iikama, iibhrashi, iibhuleyidi okanye naziphi izinto zakho.
Yahlukana nokuphatha ubuso ngezandla.
Isikhumba sakho sisebenza njengesikhuselo kwintsholongwane, kodwa amehla wakho, impumlo nomlomo zezona zibuthakathaka. Hlambisisa izandla phambi koku phatha ubuso bakho, ukutya neziselo.
Sitha xa ukukhohlela naxa uthimla.
Ukuba uyakhohlela okanye uyathimla, yenza njalo kwiphepha langasese okanye enqqinibeni ukunqanda iintsholongwane ezinako ukuhamba ngomoyeni.
Phepha abantu abagulayo.
Phepha ukudibana nabantu abagulayo kwaye ugxininise ukuba bazikhethe kwabanye bade balulame futhi bangabi nazo iimpawu.
Phepha ukudibana nezilwanyana xa ugula.
Ukuba umntu ogulayo uphatha ikati okanye inja yakhe, umzekelo, angashiya intsholongwane eboyeni besilwanyana sakhe enokusasazeka kwizilwanyane ezinye.
Ucoceko oluphangaleleyo lubalulekile ekukhuseleni usasazeko lwentsholongwane ezosulelayo. Indawo esetyenziswa ngabantu abaninzi ifuna ukucocwa rhoqo nangezibulali ntsholongwane.
Ubumdaka bungabonakala futhi bosulwe. Kodwa njengokuba ukucoca indawo kususa ubumdaka okanye ezinye izinto ezingcolileyo, ukucoca kukodwa akuzisusi zonke iintjolongwane ezinohlala ngaphezulu kwalondawo.
Ukucocisisa ngezicocisi kususa izigulo ezingabonakaliyo, ezenza izinambuzane ezingabonakaliyo ezinje ngentsholongwane. Kwaye xa umphezulu uwucocile kubalulekile ukusebenzisa izicocisi apho kusoloko kufikelela khona izandla ukwenzela ucoceko oluphangaleleyo.
Imveliso onokuzisebenzisa zokucoca
Ukucoca umphezulu wendawo, sebenzisa isibulala ntsholongwane esingumlungiselelo. Yenza unlinganiselo oyi 3% (umlinganiselo wasekhaya) ukuya ku 7.9%.
Esinye isibulali ntsholongwane esinamandla ngumrhayo wotywala okanye ushikixe utywala. Sebenzisa izinto ezinotywala ezine 70% yotywala. Ungasebenzisi izinto ezinotywala obungaphezu kwe 90%, njengoko izuqhuma phambi kokubulala iintsholongwane.
Ungasebenzisa ibleach namanzi axutyiweyo ihafu yekomityi (amacephe amane) ebleach kwikota yamanzi apholileyo (20 ml kwilitha yamanzi apholileyo). Xa ulungiselela ibleach, soloko ujonga ukuphelelwa kwebhotile ukuqinisekisa ukuba Ibleach ayiphelwanga lixesha.
Qaphela: Ungaze uyidibanise ibleach nenye into yokucoca ngaphandle kwamanzi.
Funda rhoqo ulandele imigaqo yomenzi okokuba uyifaka kanjani isibulali ntsholongwane, nexesha ekufanele ishiywe ngalo isibulali ngaphezulu.
Ukucoca nokubulala intsholongwane
Coca uphinde unyange indawo eziphathwa qho nalapho kugcwele khona ekhaya nakwindawo zokusebenza maxesha onke, kuxhomekeke ekukusebenziseni kwakho:
Imiphezulu yokubeka izinto
Neziphi iindawo eziphathwa qho
Coca iindawo zokuhlamba iziphatho zamacango:
Ukuba usebenzisa imoto xa uhamba, coca imiphezulu:
Zonke iindawo eziphathwa qho ukucoca nokunyanga
Ukuphatha ukugula okanye iimpawu
Ukuba uyagula okanye unempawu ezikhombisa ukuba uyagula, musa ukudibana nabanye abantu ufune uncedo lokunyangwa njengoko kufuneka.
Ukuzikhetha kuthetha ukuzisusa kwabanye abantu ukwenzela kungabikho ntsholongwane eziya kwabanye abantu.
Ukuzikhetha kuthetha ukuzisusa kwabanye abantu ukwenzela kungabikho ntsholongwane eziya kwabanye abantu. Ungayi emsebenzini okanye uphumele ngaphandle ukuba uyakwazi.
Ekhaya thatha imigqaliselo ukwehlisa ubungozi kwabanye okokuba nihlala endaweni enye:
Zilalele kwenye indlu.
Sebenziwa indawo yokuhlamba eyahlukileyo.
Ungahlali kwindawo kawonkewonke.
Yahlukana nezilwanyana zasekhaya.
Impahla yakho yihlambe yodwa.
Sebenzisa izitya ezisetyenziswa kube kanye zilahlwe.
Kwiimo ezinqabileyo izifo ezosulelayo uyiqwalasele ekhaya nasemsebenzini e ndaweni yakho, kukho imiqathango ekufaneleke yenziwe ekufanele.
Ngexesha lokuqhambuka kwesifo esosulelayo, thintela ukunxibelelana ngokwasemzimbeni nabanye abantu, kubandakanya ezi ntlobo zonxibelelwano zilandelayo:
umgama wenyawo ezintandathu
Ngenxa yokuba iintsholongwane zingasasazeka ngokukhohlela kunye nokuthimla, ngexesha lokufika kwesifo, kuyacetyiswa gcina umgama ongange nyawo ezintandathu (zimitha ezimbini) phakathi kwakho nabanye abantu.
Ngelixa unxibelelana nabanye, ukutya okanye ukubandakanyeka kwezinye iimeko zentlalo, ukugcina umgama othile kuyakukugcina wena kunye nabanye ukugula kungenasifo.
Kuba unokosuleleka ungakhange uyazi okanye ubonakalise nazimpawu, uhlala unxiba imaski yobuso xa ujikeleze abantu abadala okanye abantu abaneengxaki zempilo ukunciphisa ukusasazeka kweentsholongwane.
Imaski kufuneka zitshintshwe, kancinci, kanye ngemini okanye kwakamsinya nje ukuba zifumile okanye zibemdaka.
Ngaphambi kokunxiba imaski yobuso, hlamba izandla zakho ngesepha kunye namanzi.
Fumana ukuba leliphi icala lemaski eliphezulu. Ukuba imaski inomtya oqinileyo, ojingayo, oku kuthetha ukubumba ubume bempumlo yakho kwaye kungaphezulu.
Tsala amazantsi emaski ngaphezulu komlomo wakho kunye nesilevu.
Ngelixa ungagcina ikhaya lakho licocekile kwaye licocekile, ukuphuma uye ezivenkileni okanye kwiindawo zikawonkewonke kwandisa umngcipheko wokosuleleka.
Iindawo ezihlala zichukunyiswa njengezinto zokugcina iimpahla kunye neempompo zerhasi zinokuchaphazeleka ukuba umntu ogulayo uchukumise phambi kwakho.
Ukunxiba igloves ezilahlwayo kunokunceda ukukhusela usulelo lweentsholongwane. Kukho indlela echanekileyo yokubeka igloves ezilahlwayo ukuze zisebenze.
Ngaphambi kokunxiba igloves ezilahlwayo, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi.
b.	Hlambisisa izandla.
Izilumkiso ezithe kratya ekhaya naseMsebenzini
Ngexesha lokuqhuma, coca kwaye ucoce rhoqo uchukumise iindawo ezixhaphakileyo kunye neendawo ezigcwele abantu abaninzi ekhayeni lakho nasendaweni yakho yokusebenza rhoqo kunesiqhelo:
Iindawo zokubambelela zezistephu
Umxhasi ngalo wesitulo
Nazo ezinye indawo eziqhele ukuphathwa
Qiniseka ukuba nokucoca izinto ezihlala ziphathwa rhoqo:
Nasiphi na ezinye izinto ezihlala zichukuwa kunye nezinto
Coca igumbi lakho lokuhlambela, ikhitshi kunye nemoto rhoqo ngakumbi kunesiqhelo.
Fumana umkhombandlela kuyo nayiphi na intsholongwane ethile oza kuyisebenzisela uhlobo lokuqhuma. Kuya kufuneka usebenzise imveliso ebulala intsholongwane okanye intsholongwane ethile.
Ukulandela imithetho nemigaqo yendawo okuyo
Ukuba abasemagunyeni bakhupha imigaqo yendawo, amanyathelo okhuseleko okanye iinkqubo ukunqanda ukusasazeka kwesifo esosulelayo, landela lo gama besendaweni.
Ngokulandela izikhokelo kunye namanyathelo athathwa kule ncwadana, unganceda ukukhusela ukwanda kokugula ugcine imeko esempilweni.
intsholongwane: zizinto ezincinane eziphilayo ezine seli enye zibonakala kwimakroskopu kuphela. Iintsholongwane zikhona phantse kuyo yonke indawo, kuquka phakathi kunye nemizimba yabantu, ezinye ziluncedo, njengee ntsholongwane ezinceda ukucola ukutya esiswini. Ezinye zingaba neziphumo ezinobungozi, njengezo zibangela ukubola kwamazinyo okanye izifo.
iyosulela: iyagqithiseka ukusuka komnye umntu ukuya komnye.
ukutya okune tyefu: isigulo esenziwa kukutya ukutya okunee ntsholongwane.
ucoceko: izenzo ezicocekileyo nezisempilweni eziyimfuneko ekugcineni impilo.
ukhuliso: inqanaba ekukhuleni kwesifo phakathi kwexesha umntu osulelweyo ngalo kunye nexesha lokuqala kweempawu zesifo.
ezosulelayo: iyasulela kwaye iyakwazi ukudluliselwa komnye umntu isiya komnye.
isicoci: into okanye ulungiselelo lokubulala isigulo esincinci esiphiliyo.
isepha: umxube wokucoca nokubulala iintsholongane owenzelwe ukucoca nokucocisa. Igaqa okanye eyabumanzi, kufuneka lwenziwe ngezinto eziphilayo apho, xa zidityaniswa namanzi, zenza isisombululo emva koko sithatha izinto ezingafunekiyo kwisisombululo, zisenza ukuba sikwazi ukuzipula, zikhokelela kwimveliso ecocekileyo.
isifo: yimvelaphi yesifo esosulelayo emzibeni esincinane esibonakala kwimakroskopu. Isifo singahlasela abantu abaphililyo ngengqele okanye ngesifo esinobuzaza.